Madaxweynaha Galmudug oo Ku Wajahan Galkacyo (Warbixin) – Radio Daljir
Juunyo 3, 2017 5:14 b 0
Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Geelle Ducaalle Xaaf oo dhowaan lagu caleema saaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu wadaa inuu safarkiisii ugu horeeyey isagoo madaxweyne ah kuyimaada magaalada Galkacyo.
Safarka ayaa waxaa ku wehelin doona madaxweyne Xaaf xubno katirsan golaha xukuumadda maamulkaasi, xildhibaano katirsan barlamaanka iyo saraakiil.
Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay in la adkeeyey ammaanka Koonfurta magaalada Galkacyo, waxaana safarkaani ku soo aadayaa xilli maalin kahor dabley hubaysani magaalada ku dhaaweceen sarkaal katirsan ciidanka Puntland kahor inta aysan u cararin dhanka Galmudug.
Puntland iyo Galmudug ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka dhex jirtey xiisad marar badan sababtay gacan ka hadal, waxaana xusid mudan in dhowaan madaxweynaha Puntland iyo Xaaf ay heshiis ku kala saxiixdeen Cadaado.
Maxaa Todobaadkii Hore U Qabsoomay Xukuumadda Soomaaliya